रेफ्रि कुटिने राजधानी भनेर चिनिएको मोरङमा फेरि रेफ्रि कुटिए !
के मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको होम ग्राउन्ड पोखरा रङशाला हुन्छ त ?
मकवानपुर: राप्ती रिभर युवा क्लव (आरआर वाइसी)ले सी डिभिजन लिग फुटबलको छनौट खेल्ने
राष्ट्रिय टिमका कोच अलमुतैरीको गिफ्ट पाए पछी नितेश अच्म्ममा !
दियालो सेभेन-ए-साइड रनिङ कप को तालिका सार्वजनिक; प्रत्यक्ष प्रसारण गोल नेपाल डटकममा
दियालो सेभेन-ए-साइड रनिङ कप को तालिका सार्वजनिक; प्रत्यक्ष प्रसारण गोल नेपाल डटकममा सबै हेर्नुहोस्
गोपाल काफ्ले Apr 26, 2021 12:17
रेफ्रि कुट्ने जिल्ला भनेर चिनिएको नेपालको मोरङमा फेरी रेफ्रि कुटिएका छन । मोरङको सुन्दरहरैचा वडा नं. १२ मा जारि प्रथम मेयर कपको अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा रेफ्रि विनोद धिमालमाथि हात पात भएको हो ।
सानो र असुरक्षीत खेल मैदान भएका कारण दर्शकले खेल मैदानमा प्रबेश गरि रेफ्रि माथि हात पात गरेका छन । पहिलो हाफ सकिए लगतै खेल मैदान भित्र प्रबेस गरेर हात पात हुदा सम्म आयोजकले कुनै सुरक्षा रतर्कता अपनाएको देखिदैन ।
उर्लाबारी र आयोजक बिचको गोल रहित बराबरीमा रहेको खेलमा पेनल्टी नदिएको भन्दै दर्शक खेल मैदानमा प्रबेस गरेका थिए । रेफ्रीले सुरुमा आफुले पिटाई खाएपछी पिट्ने समर्थक माथि जाइलागेका थिए। आयोजक टिमका समर्थक सुन्दरहरैचाका खेम सुबेदीले मैदानमा प्रबेश गरि गरेको रेफ्रिमाथीको हातपातले आयोजक पुर्व तयारी र सुरक्षामा प्रश्न तेर्सिएको छ ।
शुक्रबारे युवा क्लबका अध्यक्ष जय नारायण चौधरी र आयोजकको फितलो सुरक्षा भित्र खेल खेलाउन बाध्य भएका मोरङका रेफ्रिहरुले कुटाई खाएको यो नै पहिलो घटना भने हैन । मोरङका खेल मैदानमा आयोजकले हचुवाको भरमा खेल खेलाउदा एक पछि अर्को रेफ्रिले कुटाई खाने गरेका छन । अघिल्लो महिना, महिला रेफ्रीलाई हातपात गरेको घटनामा मोरङ जिल्ला फूटबलसंघले २ बर्ष खेलाडीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
मोरङको पथरीशनिश्चरे, लक्ष्मिमार्ग, सुन्दरहरैचा लगायतका खेल मैदानमा रेफ्रि कुटिन थाले पछि मोरङ रेफ्रि कुटाई खाने देशको राजधानी नै बनेको छ ।
मोरङको सुन्दरहैरैचाको शुक्रबारे खेल मैदानमा यो स्तरको खेल १७ बर्ष पछाडी भएको स्थानिय बताउछन । १७ बर्ष अगाडी उत्त खेल मैदानमा भएको प्रतियोगितामा खेलाडी खेलाडी विच ठुलो झगडा भएको थियो । उत्त झगडा पछि यहा कुनै खेल हुन नसकेको एक फुटवल प्रेमी दर्शकले बताए ।
खेल मैदान असुरक्षीत हुदा हुदै र १७ बर्ष अगाडी त्यस्तो घटना हुदा सम्म आयोजकले कुनै सावधानी अपनाएको देखिदैन । शुक्रबारे युवा क्लवले बिना तयारी खुल्ला खेल मैदानमा प्रतियोतिता गराएको छ ।
रेफ्रिहरु असुरक्षित भएका कारण खेल नखेलाउने निर्णन भए पनि खेलमा लिल्ला फुटवल संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको अनुरोधमा खेल सम्पन्न भएको छ ।
बिबादका कारण रोकिएको दोस्रो खेलमा सुन्दरहरैचाले उर्लाबारीलाई पराजित गरेको छ । १४ गते हुने फाईनल खेलमा सुन्दरहरैचाले पथरी स्पोटिङ क्लवको सामना गर्ने छ । बैशाख ६ गते देखि सुरु भएको प्रतियोगिताको विजेताले नगद ३ लाखका साथ ट्रफि हात पर्ने छभने दोस्रो हुनेले १ लाख ५० हजार प्राप्त गर्ने छ । प्रतियोगिताको आयोजक शुक्रबारे युवा क्लब र सह आयोजक सुन्दरहरैचा नगरपालिका रहेको छ ।
Previous बुद्धशान्ति अध्यक्ष कपको उपाधि वडा नम्बर १ लाई
Next सुन्दर हरैचा मेयर कपको उपाधी पथरीशनिश्चरेलाई
सुन्दर हरैचा मेयर कपको उपाधी पथरीशनिश्चरेलाई
एपिएफका आशिष बने सर्वोत्कृष्ट खेलाडी
एपिएफलाई बिराट गोल्डकपको उपाधि
स्पोर्टिङ क्लबलाई ब्रिटिश सेनाहरुबाट खेल सामाग्री उपलब्ध
संकटालाई निराश बनाउँदै पञ्जाब फाइनलमा